Archive du 20201016
Rolly higadra 44 volana Efa mamoy fo ny fianankaviany
Nohelohin’ny fitsarana higadra an-tranomaizina 44 volana na 3 taona sy tapany tahaka an’I Berija Ravelomanantsoa I Harry Laurent Rahajason na Rolly Mercia Minisitry ny serasera teo aloha, araka ny didim-pitsarana nivoaka omaly 15 oktobra 2020.
Fitantanana firenena Krizy tsy voavaha, ny hetra tangosana…
Namoaka fanambarana ny teo anivon` ny foibem-pitantana ankapobeany ny hetra (DGI) fa manomboka izao dia miverina amin` ny laoniny ny asa eo amin` ny fandraharahana momba ny hetra.
Rolly higadra 44 volana Miomana handray ny fatiny ny havany
Fanamparam-pahefana tsotri’zao ny fanapahan-kevitry ny ampidirana am-ponja, raha ny nambaran’ny Antoko HVM tetsy amin’ny foibeny tetsy Andraharo omaly.
Brunelle Razafitsiandraofa “Mafy ny faratsiana ahy, aleoko tsy miteny”
Hita ho niezaka namatotra ny filoham-pirenena tamin’ny fampanantenana nataon’ity farany ireo olobe toy ny Ampanjaka sy Anakandriana tao Ikongo rehefa alalinina ny fanambarana nataon’izy ireo ny faran’ny herinandro teo mikasika ny faniriany tsy hiala amin’I Vatovavy raha toa ka tsy maintsy ho zaraina 2 ihany ny faritr’I Vatovavy Fitovinany.
Alain Ratsimbazafy “Maro ny raharaham-pirenena tsy fantatry ny vahoaka”
Hita izao fa manao letrezana ny fitondrana hanatanterahana ny fifidianana loholona amin’ny desambra, hoy ny depiote Alain Ratsimbazafy.
Mpikamban’ny CFM 2 amin’ny 44 no hany hita…
Tsy hay hoe inona izany no tena andraikitr’ireo mpikambana miisa 42 ambiny fa tao anatin’izay 3 taona mahery kely nitsanganan’ny komitin’ny fampihavanana Malagasy izay aloha dia tsy misy afa-tsy ny filohan’ny CFM sy ny filoha lefitra misahana an’Antananarivo no hany tena hita manazava ny fipetraky ny fihavanana sy fampihavanam-pirenena eto
Rehefa tsisy programa matotra Lasa mamorona hetsika ny mpitondra…
Adihevitra tato ho ato ny fitetezam-paritra ataon’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, izay sesilany sy tena mitety ny Nosy mihitsy.
Disitrikan` Beroroha Tafapetraka ireo ben`ny tanàna
Nosalorana samboady amin`ny maha ben` ny tanàna azy ireo valo mianadahy voafim-bahoaka tao anatin` ny distrikan` Beroroha omaly. T
“Hangar”-n’ny Tiko eny Ivato Mamofompofona fandravana…
Mandeha ny ritsoka fa taorian'ny tao amin’ny seranan-tsambon’I Toamasina port, dia mety horavana ihany koa ny “Hangar” misy ny Fiaramanidina ATR an’ny orinasa Tiko eny Ivato, toerana isan’ny sisa tsy potika sy tsy rava tamin’ny raharaha fandrobana sy fandorana tamin’ny 2009.
Clément Jaona Filohan’ny SMM Eddy irery angaha no nanao boaderozy?
Voatohintohina sy tandindonin-doza ny fahaleovantenan’ny Fitsarana, hoy ny Filohan’ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara (SMM) Atoa Clément Jaona omaly.
Tsy fanajana ny zon’ny mpiasa Orinasa 85 no efa nahitana olana
Mafy ny mahazo ireo mpiasa isan-tsokajiny eto amintsika hatramin’ny nisian’ny fihibohana no mankaty.
Fanapahana jiro sy rano “Tsy voakasika ireo nanao taratasy fifanarahana”
Efa miverina amin` ny laoniny ny fomba fandoavana ny faktioran` ny JIRAMA amin` izao. Midika anefa izany fa azo tapahina ny jiro sy ny rano ho an`izay tsy nahaloa faktiora na eo aza ny olana ara-tsosialy naterakin` ny valanaretina “coronavirus”.
Farittra Menabe Ahitam-bokatra ny ady amin’ny kolikoly
Mitaky fotoana lava ny fandinihana fitorohana, hoy Rakotoarisoa Faramalala, tale iraisam-paritra Antananarivo – Menabe eo anivon` ny BIANCO nandritra ny diany tany amin` ny faritra Menabe.
EDITO Efa tena mifamono…
Lavitra ny kitay ny afo amin’ny hisian’ny fampihavanana, fa mifamono sy mifamotika ny mpanao politika. Mifanagadra, ka ifandimbiasana ny fidirana any Antanimora na Tsiafahy, raha izao fizotry ny tantara izao.
Tanora Mpanabe zatovovavy ao Moramanga Nanentana momba ny fahadiovana sy fidiovana
Ny datin'ny 11 oktobra no daty anamarihana ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny zatovovavy. Tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny tao Moramanga.
Fifanakalozana ara-barotra amin’I Afrika Mitana ny laharana voalohany I Sina
Feno 20 taona amin` ity taona ity ny “forum sur la cooperation Sino-afrikanina”izay manamarika ny fiaraha-miasa eo amin`I Sina sy ireo firenena afrikanina.
EPP Talatamaty Nahazo tohana tamin’ny Kaominina
Dabilio miisa 250, kahie, kitapo ary fitaovam-pianarana, ho an’ireo mpianatra sahabo ho 400 mipariaka amin’ireo EPP miisa 10 ao anatin’ny Kaominina Talatamaty,
Belo sur Tsiribihina Miaina anaty horohoro
Tao anatin` ny roa volana dia maro ny fitairanana voaray fa misy voadaroka sy voaroba ao amin` ny tampon`ny tanànan`I Belo sur Tsiribihina. Amin` ny 07 ora hariva hatramin` ny 08 ora alina no tena hitrangan` izany.
ZRPS Alpha 2 Basy 124 no azon`ny miaramila
Nahitam-bokany ny fametrahana ireo miaramila ZRPS Alpha 2 izay miantoka ny fandriampahalemana na eny ambanivohitra na an-drenivohitra.
MPAMATSY ODY GASY NY DAHALO Lehilahy iray tratra teny Belo sur Tsiribihiana
Lehilahy iray, 45 taona, voalaza ho mpamatsy ody gasy ny dahalo any amin’ny distrikan’i Belo sur Tsiribihina no nosamborin’ny polisim-pirenena tany amin’ny kaominina ambanivohitra Tsimafana ny 14 oktobra teo.
Namono nahafaty ny vadiny Maka saina any am-ponja ilay lehilahy
Tratran’ny polisy teny Ambodivona/Soavimasoandro ny Talata alina teo ihany ilay lehilahy namono nahafaty ny vadiny teny Ambodivona Soavimasoandro.
Filankevitry ny Minisitra Nankatoavina ny findramam-bola amin’ny BAD
Nankatoavina nandritra ny Filankevitry ny Minisitra omaly 15 jolay ny volavolan-dalàna mamaritra ny fampindramam-bola nomen’ny Banky Afrikanina momba ny Fampandrosoana (BAD) entina miady amin’ny valanaretina covid-19.